Booliska Oo Xabsiga U Taxaabay Haweenay Milyaneer Ah Oo Ka Dawarsata Jidadka Caasimada Dalkaas | Hawraar
October 7, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Booliska Oo Xabsiga U Taxaabay Haweenay Milyaneer Ah Oo Ka Dawarsata Jidadka Caasimada Dalkaas
Booliska dalka Kuwait ayaa qabtay haweenay 68-jir ah oo jidadka waaweyn ee magaaladda Kuwait ee caasimadda dalkaa ka dawarsata. Haweenaydan oo qabashadeedani noqonayso tii ugu danbaysay ee boolisku ku qabtaan, waxa marar badan lagu ganaaxay in ay joojiso hawshan dawarsiga ee ay wado.
Taas oo ka danbaysay markii caruurteedu kala noqdeen kafaaladii isla markaana sheegeen inay haysato malaayiin diinaarka Kuwait ee xitaa dollarka sadex jeer ka qaalisan. Haweenaydan oo boolisku ka gaabsaday magaceeda, ayaa mar taliyaha ciidamadda booliska caasimadda Kuwait uu ka hadlayay xaalkeeda waxa uu jariiradda “Al-aan” ee ka soo baxda dalkaas u sheegay in saamiyo tira badan ay ku leedahay, shirkado ka hawl gala dalkaas, kuwaas oo sheerka ay ku darsatay ka badan yahay dad badan oo ay ka sadaqadaysato, maalin walba.
Haweenaydan oo ah muwaadinad u dhalatay dalkaas, waxa sida la sheegay ay hawsha dawarsiga ah ku jirtay ama soo waday muddo dheer, waxaanay u noqotay balwad loo taag waayay in laga joojiyo.
Meelo badan oo dunidda ah waxa ka jira ama ka dhaca arimo noocan oo kale ah, sida ka dhacday magaaladda ugu wayn dalka Argentina ee lagu magacaabo Santiego in dhawaan islaan ka dawarsan jirtay jidadka magaaladaasi markii ay dhimatay laga helay goobtii ay daganayd lacag shan milyan oo dollar ka badan, taas oo aad uga yaabisay dadweynaha ku dhaqan magaaladdas, maxaa yeelay?
Xanuunka ay u dhimatay oo ahaa mid u baahan qaliin waxa haddii ay lacagta dawarsatay ee kaydka u ahayd iskaga dawayn lahayd ay ku kici lahayd wax ka yar laba kun oo dollar, balse sidii ay ururinaysay ayay ka dhimatay iyadoo u tuulan.